बीस मुलुक समूह अर्जेन्टिना शिखर सम्मेलनबाट अपेक्षा के? - China Radio International
बीस मुलुक समूह अर्जेन्टिना शिखर सम्मेलनबाट अपेक्षा के?
(GMT+08:00) 2018-11-27 14:26:35
सन् 2008 को नोभेम्बरमा बीस मुलुक समूहको राष्ट्रानायक शिखर सम्मेलन पहिलो पटक वाशिङ्गटनमा आयोजित भएको थियो। त्यति बेला सम्मेलनको एउटा महत्वपूर्ण कार्यभार भनेको विश्व अर्थतन्त्र केही दशकयता सबैभन्दा गम्भीर मौद्रिक संकटबाट बचाउने भएको थियो। विश्व मुख्य आर्थिक समुदायबीचको सहयोगले भूमिका निर्वाह गरेर विश्व अर्थतन्त्र निरन्तर रुपमा पुन स्थिर भएको थियो।
दश वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत समक्ष फेरि एक पटक गम्भीर चुनौती देखापरेको छ। विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि भए तापनि वृद्धि दर मन्द हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य विकास पनि मन्द भएको छ। विश्व व्यापार संगठनले यस वर्ष विश्व व्यापारिक वृद्धि दर निरन्तर पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धि दरको तुलनामा कम हुने अनुमान गरेको छ। यसका साथै संरक्षणवाद र एकपक्षीयतावादले अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटीमा आघात पुर्याएर केही नवोदित आर्थिक समुदाय र विकासोन्मुख मुलुकको बजारमा डावाँडोलको स्थिति उत्पन्न भएको छ। विश्व आर्थिक खतरा र अनिश्चिततामा वृद्धि भएको छ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा बीस मुलुक समूह अर्जेन्टिना शिखर सम्मेलन आयोजित हुँदैछ। यसमा दुईटा शीर्षकमाथि छलफल गरिने छ, विश्व आर्थिक शासन र जलवायु परिवर्तन। विश्व आर्थिक शासनमा मुख्य रुपमा विश्व व्यापारिक समस्या रहेको छ। हालै विभिन्न मुलुकले व्यापारिक संरक्षणवाद र एकपक्षीयतावादको प्रतिरोध गर्ने, विश्वव्यापीकरणलाई अघि बढाउने, विश्व बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणालीको संरक्षण गर्ने एउटा जरुरी समस्या हो।
विश्व जलवायु परिवर्तन पनि शिखर सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। गत वर्षको हैम्बर्ग शिखर सम्मेलनमा अमेरिका पछि हटेर बीस मुलुक समूहले 'पेरिस सन्धि'बारे सहमति जनाउन सकेका छैनन्, तर जर्मनीका प्रधानमन्त्री एंगेला मार्केलले अन्य उन्नाईस सदस्यले संयुक्त रुपमा 'पेरिस सन्धि' पालना गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ।